Wuxuu Injineer Injineer Tareen ah Markii Loogu Magac Daray Inuu Tahay Farshaxanka Farshaxanka (Video) | RayHaber | raillynews
HometareenkaWaxaa Lagu Tababaray Tababaraha (Ma ahan Video)
08 / 11 / 2013 tareenka, GUUD, Headline, TURKEY, taraamka, VIDEO
Markii aan loo magacaabi karin macallin farshaxan, wuxuu noqday injineer tareen ah: Yasemin Ergün, oo ah macallin cilmiga farshaxanka ka ah Samsun, wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo sidii injineero tababar oo ku saabsan Nidaamka Tareenka Fudud markii aan loo magacaabi karin macallin ka dib markuu sugayay meelaynta 31 sanadka. Ergun, waxaan si aad ah ugu qanacsanahay inaan doortay macalin farshaxan. Si kastaba ha noqotee, ma aysan sameynin. Waan jeclahay shaqadeyda hada. Yasemin Ergün, oo guursatay oo leh cunug, waxay ka qalin jabisay Jaamacadda Ondokuz Mayıs, Waaxda Waxbaridda Farshaxanka ee 3. Ergun, sanadka 2007 si loogu diyaariyo imtixaannada loo magacaabayo macallimiin, ayaa galay. Si kastaba ha noqotee, looma magacaabi karo oo looma codsan karo inuu ka shaqeeyo makaanik ahaan Nidaamka Tareenka Fudud ee ay dhistay Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun. Yasemin Ergün, oo bilaabay inuu u shaqeeyo sidii injineer 3 sano ka hor, hadda waa mid ka mid ah farsamada haweenka ee 3 ee ka shaqeeya Nidaamka Tareenka.
Imtixaankii jaamacadda ka dib, Yasemin Erg saidn waxay sheegtay inay si raali ah u dooratay waaxda waxbarista farshaxanka iyada oo doorbidaysa.Waxaan diyaar u ahaa imtaxaannada laakiin la igama magacaabin. Ma aysan ahayn mid lagu go’aamiyey. Waxaan ahay mid ka mid ah macallimiinta aan la magacaabin. Kadib waxaan dalbaday shaqadan waxaanan bilaabay inaan shaqeeyo. Waxaan qabtaa shaqadayda hadda jirta si aad u fiican. Waan ku faraxsanahay. Wax xanuun ah igama dareemo. Sidoo kale haween ahaan makaanik ahaan, waxaan ka helo jawaab celin aad u wanaagsan muwaadiniinta, ayuu yidhi.
Ergün wuxuu cadeeyay in ku shaqeynta mashiinka dheddigga ay tahay shaqo adag.Markii aan arkay farsamada dheddigga sannadihii ugu horreeyay, waxaan mooday 'haweeney inay adeegsan karto aaladda, sidee u qurux badan tahay'. Isaga halkaas buu joogaa. Waxaan qabanaa shaqo fiican. Haweenku waxay ahaayeen kuwo aad u faahfaahsan oo taxaddar leh. Waxaan ku nool nahay isbedello maxaa yeelay waxaan ku shaqeynaa barnaamijyo badan. Marka taa laga reebo waxaan helayaa jawaab celin aad u wanaagsan. Mararka qaar way sacabiyaan, mararka qaarkood way ruxmaan.
Isha: waxaan www.haberler.co
Isku-xirka Tareenka Xawaaladaha Soomaliyeed Bursa
Wareegga tareenka ugu dheer ee adduunka ayaa furay (Sawirka Sawirka)
Saldhigga Tareenka iyo Mashruuca Sawir-gacmeedka Madoowga Sawirrada ee Ottoman to Present
Baaritaan lagu sameeyay shil ka mid ah injineernka tareenka xawaaraha sare ee Spain (Video)
Rinjiyeynta Rakaabka ee Xuduudda Carruurta Wada Mashruuca IZBAN
Mudanya Tababar iyo Xusuuso (Sawir)
Habka Hawlgalinta Guryaha Dhismaha, gaar ahaan Habka Xawaaladda Haydarpaşa (Sawirka Sawirka)
Sawirro ku yaal Tareenka Moscow (Sawir Sawir)
Alsancak Garda Izro Sawirro Sawirro (Sawir Sawir)
Shirkadda Garda Sawirro ayaa la furay
Tartanka Rinjiga "Tartanka Riyadayda" ayaa ku yaala dhismaha Xaramka, Tansaaniya
Samsun Nidaamka Tareenka fudud
Iyada oo YHT qof walba wejigiisa wuu ka qosliyay
Khaladka software ee Marmaray